DLULA IRiphabhulikhi XP-72 Escort FSX Native FSX & P3D - Rikoooo
I-Republic XP-72 Escort FSX Native FSX & P3D
Usayizi 54 MB
Play 1 779
Umbhali: nguMilton Shupe, uTom Falley, uNigel Richards, uScott Thomas noPilot Figure nguJan Visser
Le phakheji ihlanganisa amamodeli amane, amakheli angokwezifiso, iphaneli yangokwezifiso, imisindo yangokwezifiso, imodeli yendiza yenkambiso kanye nesibindi esinesibindi. Siyabonga ku-Milton Shupe ngalokhu okungeziwe okukhulu.
I-Republic XP-72 iyi-protectpe interceptor fighter eyenziwe njengesiqiniseko ku-P-47 Thunderbolt. I-XP-72 iklanyelwe ukwamukela i-28-cylinder Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major, ehlile emoyeni; i-turbocharger kumele ibekwe ngemuva komshayeli futhi ifakwe injini nge-shaft drive. Isikhali sinezibhamu eziyisishiyagalombili ze-12.7 × 99 mm NATO (0.5 BMG) ezifakwe emaphikweni nasemibhoshongweni yokudonsa ngaphansi kwamaphiko ukuthwala i-450 kg (1000 lb) yamabhomu. (Umthombo: i-Wikipedia)
I-Republic XP-47J Isikebhe FSX & P3D
INorthrop P-61C Umfelokazi Omnyama FSX & P3D
I-Focke Wulf Fw200 & C4C6 Condor FSX & P3D & FS9
I-Curtiss Hawk III 68 & BF2C-1 FSX